Zoom Isisombululo seFektri -IHangzhou Savgood Technology Co, Ltd.
Itekhnoloji yeSavgood -Sondeza iimodyuli zeKhamera yomenzi.
IHangzhou Savgood isekwa ngoMeyi, 2013. Sizimisele ukubonelela ngesisombululo seCCTV.
Iminyaka yokuqala, besisasaza i-Hikvision kunye neDahua yesiNgesi imveliso, siyithumela kumazwe angaphandle kwintengiso yaphesheya, eMntla Melika, eYurophu, eAisa naseAfrika. Singomnye wababoneleli ngeGolide abaPhezulu aba-10 kuDidi lweZokhuseleko kwiAlibaba.com.
Ukususela ngo-2016 Unyaka, safumana mI-ost yeLong Range Zoom izisombululo zisebenzisa ibhokisi yesiqhelo yekhamera kunye neelensi eziMoto, eziBiza kakhulu, ezingazinzanga kunye nokuSebenza okuPhantsi kugxilwe ngokuZenzekelayo.
Ukusombulula imiba yangoku yesisombululo seekhamera ezide zoLuhlu, ngokusekwe kwi-SONY eyaziwayo, ekumgangatho ophezulu wemifanekiso kunye ne-ultra starlight Exmor / Exmor R CMOS Sensor, iqela le-Savgood kunye nabathengisi abaqale ukuyila kunye nokuphuhlisa iintlobo ezininzi zeemodyuli zekhamera zoom, jolisa kwi-Ultra LONG Uluhlu lweemodyuli zekhamera. Iimodyuli ezininzi zikhutshwe ngempumelelo, umzekelo, i-4Mp 88x Zoom (10.5 ~ 920mm), 2Mp 80x Zoom (15 ~ 1200mm), 2Mp / 4K / 8Mp 50x Zoom (6 ~ 300mm), inethiwekhi kunye nohlobo lwedijithali.
Bangayixhasa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngokuchanekileyo i-Auto Focus algorithm, Defog kunye ne-IVS (Intelligent Video Surveillance) imisebenzi, umthetho olandelwayo we-Onvif, i-API ye-HTTP yokudityaniswa kwenkqubo yeqela lesithathu.
Kwakhona, okwangoku isisombululo sekhamera eshushu siyi-analog ngoku, ukuba kufuneka isisombululo senethiwekhi, ifuna iiseva zevidiyo zedijithali ukuguqula ividiyo ye-anglog iye kwiNethiwekhi, enexabiso eliphezulu, kwaye ividiyo imbi kakhulu, ulawulo lulibazisekile. Iqela le-Savgood kunye nababoneleli bethu bayila kwaye baphuhlise iimodyuli ze-IP zeekhamera zedijithali ezifudumeleyo.
Ngoku zonke iimodyuli zekhamera yokusondeza kunye neemodyuli zekhamera eshushu zathengiswa kumazwe aphesheya kweelwandle, eUnited States, eCanada, eBritani, eJamani, Israel, Turkey, India, South Korea njl Zisetyenziswa kakhulu kwiimveliso zeCCTV, izixhobo zomkhosi, ezonyango. izixhobo, izixhobo zeshishini, izixhobo zeRobot njl.
Kwaye ngokusekwe kwiimodyuli zethu zekhamera yokusondeza ebonakalayo kunye neemodyuli zekhamera eshushu, sikwadibanise iimveliso ezithile ezikhuphisanayo, iikhamera ze-PTZ, iikhamera zeDrone Gimbal njl.